मोडल हन्ट २०१९ शनिबार, ५५ प्रतियोगीबाट छानिदै
२०७६ भदौ २४ मंगलबार, प्रतियोगिको प्रतिभा निखार्ने प्रशिक्षकको जिम्बेवारी अभिनेत्री तथा मोडल परमिता राज्यलक्ष्मी राणा, रोजिन शाक्य, थेन्डुप शेर्पा वनिसा मुल्मि श्रेण, निश्चल श्रेष्ठ लगायतले निर्बाह गरेका थिए । रोजिन शाक्य प्रतियोगीताको मुख्य प्रशिक्षक पनि हुन् । ... बाँकी अंश»
रशीद खान सफलताको पछि वा सफलता उनको ?
२०७६ भदौ २४ मंगलबार, काठमाडौं। बंगलादेश बिरुद्धको एक मात्र टेष्टमा बिजयी हुँदा अफगानी कप्तान रशीद खानले विश्वका दिग्गज क्रिकेटरहरुसँग आफनो नाम लेखाएका छन्। ... बाँकी अंश»
मुस्लिम बाहुल्य देशको पैसामा गणेशको तस्विर, छापिएपछि रोकिएको थियो गिर्दो अर्थतन्त्र
२०७६ भदौ १६ सोमबार, इन्डोनेसियाको अर्थव्यवस्थामा केहि वर्ष पहिले गिरावट आएको थियो। सोपछि त्यहाँ २० हजारको नयाँ नोट जारी गरियो जसमा भगवान गणेशको तस्वीर छापिएको थियो। यसलाई छाप्नुको पछाडि आर्थिक चिन्तकहरूले विश्वास गरेका थिए कि यसले फेरि अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ पार्छ । पछि उनिहरुले भने जस्तै इन्डोनेसियाको अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन आयो। ... बाँकी अंश»
एक यस्तो देश जहाँ मुर्दासँग पनि विवाह गर्छन् मानिस, लिनुपर्छ राष्ट्रपतिको अनुमति
२०७६ भदौ १६ सोमबार, फ्रान्समा एउटा विचित्र कानून छ, जस अन्तर्गत मानिसहरूले मरेको मान्छे वा महिलालाई पनि विवाह गर्न सक्छन्। यद्यपि यस्तो विवाहको लागि व्यक्तिहरूले राष्ट्रपतिबाट अनुमति लिनुपर्दछ। राष्ट्रपतिले विशेष परिस्थितिमा उक्त व्यक्तिलाई यस कानून बमोजिम मृतकसँग विवाह गर्न अनुमति दिन सक्दछन्। ... बाँकी अंश»
अविवाहितका लागि बिशेष रेल, जीवनसाथी पाउन युवा गर्छन् दुई दिनको यात्रा
२०७६ भदौ १५ आइतबार, काठमाडौं । चीनमा अविवाहितको लागि बिशेष रेलको व्यवस्था गरिएको छ । चीनमा अविवाहितहरूको विवाहको लागि एक विशेष रेल सेवा सुरु गरिएको हो । यस ट्रेनलाई 'लभ स्पेशल ट्रेन' नाम दिइएको छ। ... बाँकी अंश»
तीजमा सुन्दर देखिन चाहानेका लागि साधारण तरिकाहरु
२०७६ भदौ १३ शुक्रबार, काठमाडौं। नेपाली र उत्तर भारतीय महिलाहरुले मनाउने हरितालिका तीजका अवसरमा कसरि राम्रो देखिने भन्ने महिलाहरुको गफको बिषय हो। के गर्दा राम्रो देखिन्छ भन्ने टिप्सहरु पनि ब्युटिसियनहरुले दिने गरेका छन्। ... बाँकी अंश»
मोदी ट्रम्पभन्दा चलाख
२०७६ भदौ १२ बिहिबार, भारतीय सञ्चार माध्यमले भने दुवैलाई जैरना र वीरु भनेका छन् । ... बाँकी अंश»
मोदीले समातेर पडकाए ट्रम्पको हात
२०७६ भदौ १२ बिहिबार, भेटघाटपछि सञ्चारकर्मी माझ आएका दुई नेताहरू रमाइलो पारमा देखिए । जब दुवै जी सेभन शिखर बैठकमा भेट भए तब मोदीले ट्रम्पको शैलीलाई चतुराईपूर्वक जवाफ दिए। ट्रम्प मोदीको हात पक्रन खोज्दै थिए तब मोदीले टात समातेर त्यसमाथि थपथपाउदै हात रातो हुने गरि हिर्काए । ... बाँकी अंश»
२०७६ भदौ १२ बिहिबार, दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिका–१४ केशवटारमा डरलाग्दो अजिङ्गर फेला परेको छ । ... बाँकी अंश»
प्याराग्लाइडिङको शोकले विपिनलाई रुवायो, यो हास्यास्पद भिडियोले सोशल मीडिया हल्लायो
२०७६ भदौ ११ बुधबार, काठमाडौं । एक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। तपाईंले यो भिडियो हेर्नुभएको पनि होला, तर के तपाईंलाई थाहा छ भिडियो भाईरल हुनुको कारण के हो? यसको सरल उत्तर छ यसको पछाडि 'कमेन्टरी' हो। सरासर हेर्ने हो भने भिडियोमा कुनै अर्थ छैन, तर हाँसो भने छुठ्न सक्छ ।यो भिडियो हेरेपछि, एउटा कुरा याद राखिएको हुनुपर्दछ कि कहिलेकाँही रमाईलो अनुभवहरूले मानिसलाई पिडा पनि दिनसक्छ । युपीका घर भएका विपिन साहु पहिलोपटक प्याराग्लाइडिंगङको अनुभव लिन मनाली उपत्यकामा पुगेका थिए । उनलाई आकाशबाट पृथ्वीको दृश्य हेर्नु थियो तर जब उनि आकाहमा पुगे, उनको अवस्था बिग्रियो र कुहिनको बीचमा उडानको दौरान, उनले दिउसै ताराहरू देख्न थाले। वास्तवमा, साहुलाई स्वसप्रस्वस सम्बन्धि समस्या थियो। उनिसँगै एक पाइलट पनि थिए, तर धेरै उचाइ देखेर उनको साहस पनि टुट्यो । उनले प्याराग्लाइडिंगङ पाइलटलाई जमीनमा उतार्न बमरम्बर आग्रह गरे। तर यी सबै चीजहरूलाई पाइलटले बेवास्ता गरिरहे। उनले पाइलटलाई पैसा दिने पनि बताए तर पाइलटले ६ मिनेट जति उनलाई आकाशमै उडाएर पछि उनलाई जमिनमा उतारे । ... बाँकी अंश»
देवता खुशी पार्न बली चढाइएका २२७ बालबालिकाको चिहान फेला
२०७६ भदौ ११ बुधबार, क्यास्टिल्लोले चारदेखि १४ वर्ष उमेरका यी बालबालिकालाई चिमु संस्कृतिका देवता खुशी पार्न बली चढाइएको बताए । उनले अझै पनि यस्ता चिहान भेटिन सक्ने बताए । “यो हृदयविदारक छ, बालबालिकामाथि यतिसम्मको अन्याय । जहाँ खन्यो, त्यहाँ बच्चाका अवशेष पाइन्छ,” क्यास्टिल्लोले भने । ... बाँकी अंश»
तीन ओभरमा सर डोनाल्ड ब्राडम्यानले बनाएको त्यो शतक
२०७६ भदौ १० मंगलबार, उनले लिथगो बिरुद्ध खेल्दै २२ बलमा शतक बनाएका थिए। उनले पहिलो ओभरमा ३३ रन, दोस्रो ओभरमा ४० र तेस्रो ओभरमा २७ रन बनाएका थिए। पहिलो ओभरमा (६,६,४,२,४,४,६,१ ) उनले ३ छक्का र तीन चौका प्रहार गरेका थिए। दोस्रो ओभरमा (६,४,४,६,६,४,६,४) चार छक्का र चार चौका प्रहार गरेका थिए। तेस्रो ओभरमा (१,६,६,१,१,४,४,६) रन बनेको थियो। उनले उक्त पारीमा २ सय ५६ रन बनाएका थिए। ... बाँकी अंश»